> Resource > iPhone > 9 Waa Dos Marka Helitaanka A New iPhone
Marka aad iPhone cusub, waxaa jira waxyaabo badan oo aad samayn lahaydeen. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad marka hore ku riday waxa ugu horeeya, gaar ahaan haddii ay tahay marka hore aad iPhone. Si aad shaqo iPhone si fiican, waxaa jira 9 waajib dos marka aad qaadan iPhone cusub. Fiiri iyaga.
1. Ku rakib Lugood
itune ka badan yahay qalab kuu ogolaanaya inaad si ay u iibsadaan iyo muusig iyo videos. Marka ay timaado in iPhone, waa aalad awood leh ma aha oo kaliya in aad awood u dajiyaan music, videos, sawiro, eBooks, podcasts, iyo ka badan si aad iPhone, laakiin sidoo kale qalab caawin doona in aad dhaqaajiso, raad raac iyo soo celinta aad iPhone. Waa qalab lagama maarmaan ka dhigaya shaqada iPhone si sax ah. Marka aad iPhone cusub, waa inaad tagtaa goobta rasmiga ah ee Apple ayaa si download Lugood oo ku xidh on your computer.
2. Samee ID Apple ah
ID Apple waa waajib haddii aad rabto in aad isticmaasho si aad iPhone sida caadiga ah. ID Apple loo baahan yahay meel kasta, Lugood Store, App Store, iCloud, iMessages, Facetime, iyo wixii la mid ah. Oo xataa aad rabto in aad weydiiso su'aal ku saabsan iPhone, weeyna u maleeyeen in aad ku soo wareegto ugu discussions.apple.com la ID Apple aad. Abuuritaanka ID Apple ah waa quruxsan fudud. Waxaa jira helitaanka badan si ay u abuuraan aqoonsiga Apple, in Lugood Store menu, arimo la 'Abuur ID Apple'; Ugu goobta rasmiga ah Apple, aad si toos ah u furi kartaa bogga internetka in ay raacaan Dardar in la abuuro ID Apple ah;
3. Guddi Your iPhone
Ka dib markii ay ku rakibidda Lugood on your computer iyo in la abuuro ID Apple ah, ka dibna aad dhaqaajiso kartaa iPhone hadda. Si aad u dhaqaajiso aad iPhone, fadlan hubi in aad horay u haystay kaararka SIM u model iPhone ah. Haddii aan, fadlan la xiriir side, iyaga oo u sheegay in ay aad u baahan tahay kaar cusub SIM cusub aad iPhone. Waa kuwan tallaabooyinku fudud si aad dhaqaajiso aad iPhone:
1). Isticmaal iPhone SIM card qalab tuurid ah in la furo saxaarad SIM ah ku riday SIM card,
2). Ku hay hoos button Wake / hurdada ka on sare ee iPhone ku guuleysatey qalabka;
3). Connect aad iPhone la your computer via cable USB iyo abuurtaan Lugood,
4). Raac Dardar ee Lugood si aad dhaqaajiso aad iPhone.
Si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida loo kiciyo iPhone, fadlan akhri hagaha >>
4. dhaqaajiso iMessage & FaceTime
Ka dib markii kaakicin aad iPhone, markaas imika u maleeyeen in aad dhaqaajiso iMessage iyo Facetime aad iPhone. Waxaad og tihiin, haddii aad heli karto si aad u deggan Wi-Fi, markaas waxaad isticmaali kartaa 2 adeegyada halka qoraalka oo lacag la'aan ah ama wac qalab Apple kale user. Haddii aad isticmaasho macluumaadka gacanta, ka dibna waxaad u baahan tahay oo keliya in ay bixiso xogta gacanta, ma u iMesssage iyo FaceTime.
Si aad u awood iMessage, Settings tuubada> Message> jeedo on iMessage. Markaas ka jaftaa diro loona helo, halkan, saxiixo in ID Apple aad u xiri lambarka telefoonka aad la ID Apple aad. Ka dib markaas, Apple isticmaala qalab aad u soo diri kartaa farriin qoraal ah midkood la lambarka telefoonka aad ama cinwaanka email ID Apple.
Si aad u awood Facetime on iPhone, ka jaftaa Settings> FacetTime> shid FaceTime. Waxaad In lagu tagi karaa goobta FaceTime, saxiixo in la ID Apple iyo xiri lambarka telefoonka aad la ID Apple aad.
5. Calan iCloud
iCloud waa quruxsan muhiimka kuu ah haddii aad rabto in gurmad aad iPhone si fudud ama wadaagaan files ka mid ah qalabka macruufka kala duwan. Ka dib helitaanka iPhone cusub, waa in aad ku sawirnaa Settings> iCloud> saxiixa in la ID Apple aad. Ka dib markaas, waxaad dooran kartaa in files in gurmad ay u iCloud ay u suuro-app u dhigma.
6. Calan Raadi My iPhone
Si ammaanka aad iPhone, waa in aad qotomisay Raadi My iPhone. Ka dib waxaa suuragelinayo in iCloud, mar kasta oo aad ka heli telefoonka maqan yahay ama uu lumo, aad awood karaa hab lumay, gab ama masixi aad iPhone fog. Si aad u awood, Settings tuubada> iCloud> Hel My iPhone> mari Fine My iPhone in ON.
7. Calan u habayn ama ID Touch
Si loo arki dadka kale ula kac ahayn u sii macluumaadka gaarka kuu ah, waa in aad awood u ID taabashada ama habayn. ID Touch akhrin doonaa faraha iyo garanayaa kii aad tahay. Haddii aad doorato soo maleegaya habayn, ka dib mar walba, waxaad u leedahay in galaan habayn si ay u helaan iPhone. Si aad qotomisay habayn ama ID Touch, tuubada Settings> Touch ID & habayn> awood iPhone Unlock> markaas waxaad samaysan karta labada ID Touch iyo habayn. Wixii faahfaahin dheeraad ah, fadlan akhri sida loo isticmaalo ID Touch on iPhone >>
8. nidaameed Content si iPhone
Haddii tani ay tahay iPhone hore iyo telefoonka aad hore waa aalad Android, markaas waa in aad u guurto xiriirada ka telefoonka aad Android inay iPhone. Fiiri sida ay u faahfaahin ah ee sida loo sameeyo . Haddii tani ay tahay labaad iPhone, markaa waa in aad hore gurmad iPhone iyo soo celinta cusub iPhone la iPhone ugu horeysay ee gurmad file. Si aad u dhigay songs, videos, iyo sawiro ka your computer si aad iPhone, waa in aad isticmaasho Lugood inay iyaga u hagaagsan in iPhone. Halkan waxa ku jira tallaabooyin ay ku hagaagsan content ka Lugood si iPhone
9. Download Apps si iPhone
iPhone yimaado iyadoo qaar ka mid ah barnaamijyadooda default. Si kastaba ha ahaatee, kuma filna in aad leedahay nolosha mobile wanaagsan. Eegista Waa in aad kala soo bixi barnaamijyadooda aad u baahan tahay, sida iBooks u eBooks akhriska, app Podcast inuu u ciyaaro podcasts, WordPress si ay u wadaagaan files ka mid ah aaladaha kala duwan, iwm Si download barnaamijyadooda, waa in aad abuurtaan ka app App Store aad iPhone> raadinta app aad u baahan tahay la raadinta ifinaya> heli app aad u baahan tahay oo guji download> saxiixa in la ID Apple aad.